लव्नोक्स बनाम हेपेरिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी चेकआउट कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी मनोरञ्जन भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> लव्नोक्स बनाम हेपेरिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
लव्नोक्स बनाम हेपेरिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
रगतको थक्काको उपचार गर्न वा रोक्न तपाईंलाई लव्नोक्स (एनोक्सापेरिन) वा हेपेरिन सल्लाह दिन सकिन्छ। लभ्नोक्स र हेपेरिन दुबै इंजेक्शन योग्य औषधि हो जुन एन्टिकोआगुलेन्ट्स भनिने औषधीहरूको ठूलो समूहको अंश हुन्। एन्टीकोआगुलेन्ट्स, वा रगत पातलोको रूपमा, लव्नोक्स र हेपेरिनले गहिरो नसा थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) र पल्मोनरी एम्बोलिजम (पीई) लाई उपचार गर्न र रोक्न मद्दत गर्दछ।
दुबै লাভ्नक्स र हेपेरिनसँग कार्यको समान विधि रहेको छ। तिनीहरू एन्टिथ्रोम्बिन भनिने सानो प्रोटीन अणुको लागि बाँधेर र थ्रोम्बिन, कारक Xa, र रगत जमाउनेमा संलग्न अन्य एन्जाइमहरूको कार्यहरूलाई रोक्दै काम गर्दछन्। जे होस् Lovenox लाई कम आणविक तौल हेपेरिन (LMWH) को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, यो मानक हेपेरिन जस्तो छैन।
लभ्नक्स र हेपेरिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
लव्नक्स एनोक्स्यापारिनका लागि ब्रान्ड नाम हो। यो एक LMWH सानोफि-एवेंटिस द्वारा निर्मित हो। लभ्नोक्स उप-कटौती (छालाको मुनि) सम्म इंजेक्शन गरिन्छ, र यो दुई स concent्द्रतामा उपलब्ध छ: १०० मिलीग्राम / एमएल र १ 150० मिलीग्राम / एमएल।
लभ्नक्सको प्रिफिल्ड सिरिन्ज विभिन्न शक्तिहरूमा आउँदछ र 300०० मिलीग्राम / m मिलि बहु-खुराक शीशाहरूमा पनि उपलब्ध छ।
Lovenox वरपरको आधा जीवन छ To. to देखि hours घण्टा प्रशासन पछि, र यसको एन्टिकोआगुलेन्ट प्रभाव १२ घण्टा सम्म रहन्छ। यसको लामो आधा जीवन र अनुमानित प्रभावहरूको कारण, लव्नोक्सलाई यसको प्रयोग गर्न विस्तृत अनुगमन वा पर्यवेक्षणको आवश्यक पर्दैन।
हेपेरिन, मानक हेपेरिन वा फ्रिक्रेटेड हेपेरिन (UFH) को रूपमा पनि चिनिन्छ, एक जेनेरिक ईन्जेक्शन हो। हेपरिन पनि हेप-लक जस्ता ब्रान्ड नामहरूमा जान्छ।
हेपेरिन प्राय: शिरा द्वारा (नसा मार्फत) वा उप-कट्युनिटी (छालाको मुनि) प्रशासित हुन्छ। यो एकल डोज र बहु-खुराक फारमहरूमा उपलब्ध छ भिन्न शक्तिहरूसँग जुन १,००० यूएसपी एकाइ / एमएल, US,००० यूएसपी एकाइ / एमएल, र १००० यूएसपी एकाइ / एमएल समावेश गर्न सक्दछ।
लभ्नक्सको तुलनामा, हेपरिनसँग ०. to देखि २ घण्टाको छोटो आधा जीवन हुन्छ। हेपरिन लाईभ्नोक्स भन्दा अधिक पटक दिन आवश्यक छ, र यो सामान्यतया अस्पतालको सेटिंगमा प्रशासित हुन्छ। हेपेरिनको एन्टीकोआगुलेन्ट प्रभावहरूलाई अनुगमन गर्न आवश्यक छ किनभने यसको प्रभावहरू कम आणविक तौल हेपेरिन भन्दा अधिक अप्रत्याशित छन्।
Lovenox र हेपेरिन बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? एनोक्सापेरिन हेपरिन हेपेरिन सोडियम ADD-Vantage का सामान्य नाम हो
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? इंजेक्शनको लागि समाधान इंजेक्शनको लागि समाधान
मानक खुराक के हो? Mg० मिलीग्राम subcutomot दैनिक रूपमा एक पटक। उपचार अवस्थाको आधारमा खुराक फरक हुन सक्छ। Units००० एकाइहरू प्रत्येक आठ देखि १२ घण्टा subcutomot। उपचार अवस्थाको आधारमा खुराक फरक हुन सक्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? Days दिन, बढी वा कम सर्तमा भर पर्दै उपचार गरिएको Days दिन, बढी वा कम सर्तमा भर पर्दै उपचार गरिएको
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क, बच्चाहरू, र शिशुहरू वयस्क, बच्चाहरू, र शिशुहरू
Lovenox मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Lovenox मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरु Lovenox र हेपेरिन द्वारा उपचार
दुबै Lovenox र हेपेरिन संयुक्त राज्य अमेरिका मा उपचार को लागी अनुमोदित छ शिरापरक थ्रोम्बोइम्बोलिज्म (VTE) , एक यस्तो अवस्था जसमा गहिरो शिरा थ्रोम्बोसिस र पल्मोनरी एम्बोलिजम सामेल हुन्छ। रगतका धब्बाहरू प्राय: खुट्टा वा हतियारहरू (डिप वेन थ्रोम्बोसिस / डीवीटी) मा बन्न सक्छन् र फोक्सोको यात्रा गर्न सक्छन् जहाँ तिनीहरू रक्त वाहिकामा बसीन्छ (पल्मोनरी एम्बोलिजम / पीई)।
लभ्नक्स र हेपेरिन रगतको थक्काको रोकथामको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी घुडा सर्जरी वा हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरी जस्ता सर्जरी पछि। शल्यक्रिया पछि ओछ्यानमा आराम रगत क्लोटको लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम कारक हो। रगतको थक्काको लागि अन्य जोखिम कारकहरूमा रगत जमाउने गडबडी, गर्भावस्था, मोटाई, धूम्रपान र क्यान्सरको पारिवारिक इतिहास समावेश छ।
हेपेरिनलाई रगतको क्लोटहरू हुनबाट बचाउन र उपचार गर्न पनि अनुमोदन गरिएको छ एट्रियल फाइब्रिलेशन । यसको विपरित, लोभ्नक्सलाई उपचार गर्न र रोकथाम गर्न अनुमोदन गरिएको छ जो केहि प्रकारको छाती दुखाई (अस्थिर एन्जाइना) र हार्ट अट्याक (नन-क्यू-वेव मायोकार्डियल इन्फेक्शन) अनुभव गर्दछन्।
सर्त Lovenox हेपेरिन
शिरापरक थ्रोम्बोइम्बोलिजमको उपचार र रोकथाम हो हो
शल्यक्रिया पछि रगतको थक्काको रोकथाम र रोकथाम हो हो
जटिलताको एट्रियल फाइब्रिलेसनबाट बचाव र उपचार अफ-लेबल हो
अस्थिर एनजाइना र हृदयघातबाट जटिलताको रोकथाम हो अफ-लेबल
के लभ्नक्स वा हेपेरिन बढी प्रभावकारी छ?
Lovenox र हेपेरिन दुबै रगतको थक्कीहरूको उपचार र रोकथामको लागि प्रभावकारी छन्। रगत अधिक स्वतन्त्र बग्न दिनको लागि तिनीहरू समान तरिकाले कार्य गर्दछन्। अर्कोमा एक औषधिको लागि प्राथमिकता लागत, साइड इफेक्टहरू, र प्रशासनमा निर्भर गर्दछ।
हेपेरिनको तुलनामा, लव्नक्सको आधा जीवन हुन्छ। अर्थ, यो लामो समय सम्म रहन्छ र दैनिक एक पटक प्रशासित गर्न सकिन्छ। लभ्नोक्ससँग डोजि more बढी अनुमान गर्न सकिन्छ, जबकि उच्च शरीरको वजन सहित बिरामीहरूलाई बारम्बार दोहोर्याई आवश्यक पर्दछ, जस्तै दैनिक रूपमा दुई पटक एक इन्जेक्शन।
बाट मेटा-विश्लेषणमा थ्रोम्बोसिस र हेमोस्टासिस जर्नल , एनोक्स्यापरिन र फ्रिक्रेटेड हेपेरिनलाई अस्पतालमा बिरामीहरूमा रगतको थक्की रोकथामको लागि तुलना गरिएको थियो। चार क्लिनिकल परीक्षणहरू मेटा-विश्लेषणमा समावेश गरियो र कुल 3,,6०० बिरामीहरूको मूल्यांकन गरियो। परिणामहरू पत्ता लगाइए कि हेपेरिनको तुलनामा, एनोक्सापारिनले रगतको बकबकमा ठूलो रक्तस्राव हुने जोखिम नबनाई घटायो
Lovenox प्रयोग गर्नका लागि एउटा चेतावनी यो हो कि यसको खुराक रेनल असफलता भएका बिरामीहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, रक्तस्राव हुने खतरा बढेको छ। क्लिनिकल अभ्यासमा, भ्रुण हेपेरिन किडनी अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको लागि रुचाईन्छ।
तपाईंको डाक्टरले तपाईको सर्तका लागि सबै भन्दा राम्रो एन्टीकोआगुलेन्ट लेख्दछ। सबै भन्दा प्रभावकारी anticoagulant तपाइँको समग्र चिकित्सा ईतिहासको आधारमा निर्धारित गरिन्छ।
कभरेज र लव्नोक्स बनाम हेपेरिनको लागत तुलना
धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु Lovenox लाई कभर गर्नेछ। जे होस्, बीमाले जेनेरिक लव्नोक्सलाई कभर गर्ने बढी सम्भावना छ, र तिनीहरूले पूरा लागत कभर गर्न सक्दैनन्। Lovenox को औसत खुद्रा मूल्य $ 380 को आसपास छ। यदि तपाईं फार्मेसीबाट घर प्रयोगका लागि लभ्नक्स ईन्जेक्सनहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पैसा बचत गर्न एक Lovenox एकलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Lovenox को लागी पूर्ण मूल्य तिर्नुको सट्टा, तपाईले १० जेनेरिक प्रिफिल सिरिन्जका लागि $$ भन्दा कम तिर्न सक्नुहुनेछ।
हेपेरिन प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। यो Lovenox भन्दा कम खर्चिलो पनि हुन्छ। अझै, हेपेरिनको औसत खुद्रा मूल्य and १२० हो, मात्रा र खुराकमा निर्भरता। एकलकेयर कूपनको साथ, तपाई यसलाई participating 50 भन्दा कममा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सहभागी participating फार्मेसीमा।
मानक खुराक Mg० मिलीग्राम subcutaneously दैनिक एक पटक (१० को मात्रा) Units००० एकाइहरू हरेक आठ देखि १२ घण्टा (१० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ –$ $ .$ । 1– $ 3
एकलकेयर लागत + +१ + $ 45 +
लव्नोक्स बनाम हेपेरिनको साझा साइड इफेक्टहरू
Lovenox र हेपेरिनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट भनेको इन्जेक्शन साइट प्रतिक्रिया हो। लभ्नोक्स वा हेपेरिन ईन्जेक्शनहरू प्रशासित गरे पछि तपाईले दुखाइ, अस्वस्थता, जलन, वा इंजेक्शनको वरिपरि सूजन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यी साइड इफेक्टहरू हल्का हुन सक्छन् र आफ्नै रूपमा जानुहोस्।
किनकि लभ्नक्स र हेपेरिनले रगतको थक्का रोक्दछ, त्यसैले उनीहरूले रक्तस्राव साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। Lovenox वा हेपेरिन प्रयोग गर्दा, तपाईं अधिक बारम्बार चोट लाग्न सक्नुहुन्छ। एन्टिकोआगुलेन्टहरूले पनि गम्भीर रक्तस्राव हुन सक्छ। गम्भीर रक्तस्रावको स्केतहरूमा भारी मल र रगत मलमा वा मूत्रमा समावेश छ। यदि तपाईले गम्भीर रक्तस्रावको लक्षण देख्नुभयो भने चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्
अन्य सामान्य साइड इफेक्टको लागि तलको चार्ट हेर्नुहोस्।
पीडा, जलन, इंजेक्शन साइट वरिपरि सूजन हो * हो *
रक्तस्राव हो * हो *
उन्नत कलेजो इन्जाइमहरू हो * हो *
मतली हो * हैन -
पखाला हो * हैन -
स्रोत: डेलीमेड ( Lovenox ), डेलीमेड ( हेपेरिन )
लभ्नक्स बनाम हेपेरिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
Lovenox र हेपेरिनको समान ड्रग अन्तर्क्रिया छ। प्लेटलेट इनहिबिटरहरू, वा एन्टिपालेटलेट एजेन्टहरू, ड्रग्सको बिभिन्न वर्ग हो जसले रगतको धब्बाहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। क्लोपीडोग्रल, टिकागेलर, वा ल्यासोक्स वा हेपेरिनको साथ परागसेटल एन्टिपालेटलेट्सको संयोजन गर्नाले रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ।
Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) लाई असर गर्न सक्छ प्लेटलेटको कार्य । जब NSAID लाई लभ्नोक्स वा हेपेरिन सँगसँगै लिन्छ भने रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ। यदि तपाइँ लव्नोक्स वा हेपेरिनमा उपचार सुरु गर्नु अघि NSAIDs लिदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो डाक्टरलाई भन्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग Lovenox हेपेरिन
सेलेकोक्सिब Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) हो हो
Dipyridamole Antiplatelet एजेंटहरू हो हो
Lovenox र हेपेरिनको चेतावनी
एन्टीकोआगुलेन्ट्स जस्तै लव्नोक्स र हेपरिनले ठूलो रक्तस्राव, वा हेमरेजको जोखिम बढाउन सक्छ। रक्तस्राव गम्भीर हुन सक्छ र प्राय: जसो संकेतले संकेत गर्छ जस्तै रगत पखालो वा मलमा। रक्तस्रावको जोखिम पनि रक्तस्राव विकारहरूको इतिहास भएका व्यक्तिहरूमा बढी हुन सक्छ।
हेपेरिन हुन सक्छ हेपेरिन-प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (एचआईटी) , एक गम्भीर अवस्था कम प्लेटलेट गणना द्वारा विशेषता। जबकि व्यक्तिले एचआईटीको स्पष्ट लक्षणहरू अनुभव गर्दैन, यो एक सम्भावित जीवन-जोखिमपूर्ण जटिलता हो जुन गम्भीर रक्तस्राव वा मृत्युको परिणाम हुन सक्छ। लभ्नक्सको तुलनामा, हेपरिनमा एचआईटीको उच्च जोखिम छ। यस कारणका लागि हेपेरिनको प्रयोग प्रायः नजिकबाट निगरानी गरिन्छ।
लभ्नक्सले स्पाइनल एपिड्युरल हेमेटोमा, वा मेरुदण्ड वरिपरि रगत स collection्कलनको बढेको जोखिम बोक्दछ। मेरुदण्डको एपिडेरल हेमेटोमाले जटिलता वा पक्षाघात हुन सक्छ। जोखिम बढाइएको छ यदि तपाईंसँग विगत वा आवर्ती मेरुदण्ड वा एपिड्युरल पंचर छ; तपाईं NSAIDs, प्लेटलेट इनहिबिटरहरू, र एन्टिकोगुलन्ट्स लिदै हुनुहुन्छ; वा तपाइँसँग एक इनडेल्विing एपिडुरल क्याथेटर छ।
Lovenox र हेपेरिनसँग सम्बन्धित अन्य सावधानीहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
लव्नोक्स बनाम हेपेरिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
लभ्नक्स भनेको के हो?
Lovenox एक इंजेक्शन एन्टीकोआगुलेन्ट, वा रगत पातलो छ। यसलाई कम आणविक तौल हेपेरिनको रूपमा पनि वर्गीकृत गरिएको छ। Lovenox १०० मिलीग्राम / मिलि र १ mg० मिलीग्राम / मिलिको एकाग्रतामा उपलब्ध छ। यो प्राय: एक वा दुई पटक सबकुटेनियस इन्जेक्शनको रूपमा प्रशासित गरिन्छ। Lovenox को जेनेरिक नाम enoxaparin हो।
हेपेरिन मानक वा को रूपमा पनि चिनिन्छ फ्रिक्रेटेड हेपेरिन । यो जेनेरिक वा ब्रान्ड-नाम संस्करणहरूमा उपलब्ध छ। हेपेरिन एक शिरा वा उप-सूक्ष्म इंजेक्शनको रूपमा प्रशासित छ। यो सामान्यतया अस्पतालको सेटिंगमा दिइन्छ, जबकि हेपरिनका केही प्रकारहरू घरमा प्रशासित गर्न सकिन्छ।
के Lovenox र हेपेरिन एकै हो?
Lovenox र हेपेरिन एक समान छैन। Lovenox एक कम आणविक वजन हेपेरिन (LMWH) हो, जुन मानक वा अपघटन हेपेरिन (UFH) भन्दा फरक छ। जे होस् लभ्नोक्स र हेपेरिन दुबै एन्टीकोआगुलेन्टहरू हुन्, तिनीहरूसँग बनावट र एफडीए-अनुमोदित उपयोगहरूमा भिन्नताहरू छन्।
के लभ्नक्स वा हेपेरिन राम्रो छ?
लभ्नक्स र हेपेरिन दुबै रक्तको थक्म्बो अवस्था (डीभीटी) र पल्मोनरी एम्बोलिजम (पीई) जस्तै रगत जम्मा गर्ने स्थितिको उपचार र रोकथामको लागि दुवै प्रभावकारी छन्। लव्नोक्ससँग अधिक पूर्वानुमान योग्य खुराक र निगरानी प्यारामिटरहरू छन् र यसैले, यो घर प्रयोगको लागि बढी रुचाइएको छ। Lovenox को लामो आधा जीवन मतलब यो दैनिक एक पटक गर्न सकिन्छ।
Lovenox को तुलनामा, हेपेरिन अधिक छ र अधिक मात्रामा डोज गर्नु आवश्यक छ किनभने यसको छोटो आधा जीवनको कारण। हेपेरिन लभ्नक्स भन्दा कम खर्चिलो छ, र यो प्राय जसो अस्पताल सेटिंग्समा प्रशासित गरिन्छ जहाँ प्रतिकूल प्रभावहरूको लागि अनुगमन सजिलो हुन्छ।
के म गर्भवती हुँदा लभ्नक्स वा हेपेरिन प्रयोग गर्न सक्छु?
लभ्नक्स वा हेपेरिन सामान्यतया सुरक्षित र थ्रम्बोइम्बोलिक विकारहरूको उपचारको लागि प्रभावशाली हुन्छन् गर्भावस्था को समयमा । दुबै एन्टिकोएगुलेन्टहरूले प्लेसेन्टालाई पार गर्दैनन्। यद्यपि, लोभ्नक्स जस्ता कम आणविक तौल हेपेरिनहरू (LMWHs) गर्भवती महिलाहरूमा रगतको थक्काको उपचारको लागि रुचाइन्छ।
म रक्सीको साथ लभ्नक्स वा हेपेरिन प्रयोग गर्न सक्छु?
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु Lovenox वा हेपेरिन प्रयोग गर्दा रक्सी सीमित वा बेवास्ता गर्न सल्लाह दिन्छन्। रक्सी रगत पातलोको रूपमा काम गर्न सक्छ , जसले रक्सी बन्धनलाई एन्टिकोएगुलेन्ट ड्रगसँग मिसाउँदा खतराहरू बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ।
हेपेरिनको सट्टा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?
कम आणविक तौल हेपरिनहरू (LMWHs) अक्सर हेपरिनको सट्टा प्रयोग गरिन्छ। लभ्नक्स (एनोक्सापेरिन), फ्रेगमिन (डल्टेपेरिन), र ईन्नोहेप (टिन्जाप्रिन) LMWH का उदाहरण हुन् जुन रगतको थक्काको उपचार गर्न वा रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एरिस्ट्रा (फोंडापेरिनक्स) अर्को एन्टिथ्रोम्बोटिक एजेन्ट हो, जुन LMWH र UFH भन्दा फरक हुन्छ, जसले कारक Xa लाई रोक्न र रगतको थक्कीहरूको उपचार गर्न सक्छ।
प्रत्यक्ष मौखिक एन्टीकोआगुलेन्ट्स (डीओएक्स), जुन गोलीको रूपमा आउँछ, हेपेरिनको सट्टा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। डीओएसी का उदाहरणहरु Xarelto (rivaroxaban), Radaxa (dabigatran), र Illquis (apixaban) शामेल छ।
लभ्नक्स केको लागि प्रयोग गरिएको छ?
लभ्नॉक्स (एनोक्सापेरिन) एन्टिकोआगुलेसन र थ्रोम्बोप्रोफिलक्सिसको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले रक्त नलीहरूमा बनेको रगतको थक्कीहरू उपचार गर्न वा रोक्न मद्दत गर्दछ। लभ्नक्सले रगतको थक्काको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ जुन खुट्टाहरू वा पाखुरा (डिप वेन थ्रोम्बोसिस) वा फोक्सोमा फेर्ने बस्तुहरू (पल्मोनरी एम्बोलिजम) का गठन गर्दछ। Lovenox अस्थिर एनजाइना र हृदयघातको केहि प्रकारहरूको जटिलताहरूलाई रोक्नको लागि पनि उपयोगी छ।
के लभ्नक्स उच्च जोखिमयुक्त औषधि हो?
Lovenox एक उच्च जोखिम, वा उच्च सतर्क औषधि हो। यद्यपि यो सामान्यतया सुरक्षित औषधि हो, तथापि Lovenox ले गम्भीर चोटपटक र जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ यदि गलत प्रयोग गरियो भने। यदि Lovenox एक अधिक मात्रा मा दिइन्छ, रक्तस्राव र प्रतिकूल प्रभाव को एक बढि जोखिम छ। Lovenox केवल एक प्रिस्क्रिप्शन र एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट उचित मार्गदर्शनको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
पेनिसिलिन र amoxicillin को बीच के फरक छ?
कति प्रतिशत अमेरिकीहरु तौल वा मोटो छन्
कहिले सम्म एन्टिबायोटिक पछि तपाइँ एक खमीर संक्रमण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
कति पटक तपाइँ xanax 1mg लिन सक्नुहुन्छ